सौंफ बीज (सौंफ) को स्वास्थ्य लाभ - PAMPEREDPEOPLENY.COM - स्वास्थ्य
सौंफ बीजको स्वास्थ्य लाभ (सौंफ)
समाचार मंगलबुरो तटमा डु with्गामा ठक्कर खाँदा तीन जना मछुवाको मृत्यु हुने डर छ
घर स्वास्थ्य कल्याण कल्याण ओआई-अन्वेशा द्वारा अन्वेषा बरारी | अद्यावधिक गरिएको: आइतबार, सेप्टेम्बर,, २०१२, :3:2I [IST]
विशेष गरी सन्तोषजनक खाना पछाडि हामी सबै मीठो बen्गुरको बोटको प्रतीक्षा गर्छौं। भारतमा, saunf वा सौंफ बीउ एक धेरै लोकप्रिय प्राकृतिक मुख ताजा छ। प्रत्येक रेस्टुरेन्टले यसको मुखको कचौरा यसको रिसेप्शनको नजिक ताजा राख्छ ताकि पाहुनाहरू बाहिर एक मुट्ठी भरिन सक्छन्। केही व्यक्तिहरू घरमा सौंफको भाँडो पनि राख्छन् ताकि प्रत्येक भोजन पछि थोरै खाऊन्। यो धेरै व्यंजनहरू मौसममा मसलाको रूपमा प्रयोग हुन्छ।
यद्यपि, हामी यस तथ्यलाई बेवास्ता गर्छौं कि सौंफको बीउले धेरै स्वास्थ्य लाभहरू पनि पुर्‍याउँछ। यहाँ यस अद्भुत मसलाको मुख्य स्वास्थ्य लाभहरू छन्।
तपाईंको खाना पचाउँछ: के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि हामी किन खाना पछी सौंफको दाना खान्दछौं? यो केवल एक प्राकृतिक मुख ताजा भन्दा बढी हो। यो मसलामा फाइटोस्टोजेनको राम्रो अनुपात छ जुन तपाईंलाई खाना पचाउन मद्दत गर्दछ र एक इरिटेल ग्यास्ट्रिक ग्रंथिलाई सुख दिन्छ।
केटीको सर्वश्रेष्ठ मित्र: के तपाईंको पीरियड्सको अवधिमा केहि गम्भीर खराब नराम्रा चीजहरू छन्? त्यसोभए तपाईंले यी बीउहरूको एक मुठीमा माचिंग राख्नु पर्छ। तिनीहरू PMS र मासिक धर्म सम्बन्धित पीडा निको पार्नका लागि धेरै उपयोगी छन्। वास्तवमा, यदि तपाईं नर्सि mother आमा हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए यसले तपाईंलाई र तपाईंको बच्चाहरूलाई दोहोरो फाइदा पुर्‍याउँछ। सौंफको पाचन गुणहरू स्तनपानको क्रममा आमाबाट बच्चामा सारिन्छन्। यसले नवजात शिशुहरूमा कोलिक दर्द निको पार्न मद्दत गर्दछ।
तपाईंको आँखाको लागि बीज: यी बीउहरूको नियमित खपतले सुनिश्चित गर्न सक्दछ कि तपाईंसँग स्पष्ट दृष्टि छ। वास्तवमा, यो विशेष गरी मधुमेह रोगीहरूको लागि उपयोगी छ। अनुसन्धानले प्रमाणित गरेको छ कि सौंफको दानाले जलबिन्दु हुने बिरामीहरूको दृष्टिकोण पनि पुनर्जीवित गर्न सक्छ।
मेमोनिमेन्ट को मेन्डिमेन्ट: हाम्रो जीवन मा सबै तनाव डिमेन्शिया र अन्य मस्तिष्क विकारहरु हाम्रो सबैभन्दा ठूलो डर बनाएको छ। के अनुमान गर्नुहोस्, यो मसलाले वास्तवमा तपाईंलाई मस्तिष्क सम्बन्धी रोगहरूलाई बेमा राख्न मद्दत गर्दछ। सौंफले मस्तिष्कको संज्ञानात्मक कार्यहरू पनि सुधार गर्दछ।
रक्त प्युरिफायर: हामीले नेतृत्व गरेको जीवनशैलीले हामीलाई हाम्रो शरीरमा धेरै विषाक्त पदार्थहरू सulate्कलन गर्दछ। तिनीहरूबाट छुटकारा पाउन तपाईंले यी कच्चा बीउहरूमा चर्नु पर्छ। यसले रगतबाट यूरिक एसिड निकाल्छ र जोर्नीशोथका बिरामीहरूको लागि ठूलो हो। वास्तवमा, साउन्फमा एक विशेष आवश्यक तेल हुन्छ जसले रगतबाट विषाक्त तत्वहरू हटाउन मद्दत गर्दछ।
स्वस्थ सास: हामी सबै बाँच्छौं किनकि हामी सास फेर्छौं। त्यसोभए यो निश्चित गर्न हामी एकदम राम्रो छ कि हामी सास फेर्न सक्षम छौं। सौंफमा एनेथोल र सिनेओल नामक रसायन हुन्छ जसले फोक्सोको भीड र सामान्य खोकी र चिसो निको पार्न मद्दत गर्दछ। यो एलर्जीको ब्राँकाइटिस वा दम भएका मानिसहरूलाई लागि राम्रो हो।
यी आश्चर्य मसलाका मुख्य स्वास्थ्य लाभहरू हुन्। यसको अन्य फाइदाहरूमा ताजा सास र चमकदार छाला समावेश छ।
स्वस्थ अंडाशय र गर्भाशयको लागि खाद्य पदार्थ
maihar mata Mandir कहानी हिंदीमा
कसरी घरमा तपाईंको छाला चमक्ने
स्वाभाविक रूपमा स्तनको आकार घटाउन घरेलु उपचार
तपाईंलाई ज्वरो आएको छ भने के खानु पर्छ
भारतीय झण्डामा र colors्गको महत्व